IiVirserums kyrka | Tyelela uHultsfred
ekhaya » Bona kwaye wenze » Utsalo lwezotyelelo » Iindawo zenkcubeko nezembali » Icawa yaseVirserum
Icawa yaseVirserum yakhiwe ngesimbo se-neo-Gothic esineempawu zayo eziphezulu kunye neefestile ezibonisa iiarched kunye neefowuni.
Icawe yangoku yaseVirserum yakhiwa ngonyaka we-1879-1881.
Icawa yokuqala ithathwa ngokuba isusela kwinkulungwane ye-1300.
Yatshiswa ngumlilo ngaxesha lithile ngenkulungwane ye-1500. Akuqinisekanga ukuba icawe iphela yatshiswa okanye yonakala kakubi.
Ixesha lokuqala imithombo ebhaliweyo esivumela ukuba siqashele nayiphi na inkangeleko yecawa yileta yasebukhosini eqala ngo-Okthobha 29, 1690, xa ibandla linikwa imvume yokuqokelela ukwakhiwa ngokutsha kwenxalenye yeNtshona yecawa, edilikileyo kwaye engonelanga .
Icawe endala yadilizwa ngo-1880. Iinkuni zathengiselwa iSweden Missionary Association ye-SEK 100 yaze yasetyenziswa kwakuloo nyaka kwakwakhiwa icawe yase-parish. Imizobo yokuqala yecawa entsha yalungiswa ngumyili wezakhiwo uLudvig Hedin, eStockholm. Nangona kunjalo, icawe entsha yayilwa nguCarl Gust Löfquist, u-Oskarshamn. Yaqala ukusetyenziswa kwilothari yeKrisimesi ngo-1880.
Ukusuka kwicawa yakudala i-altarpiece igcinwe, ngubani owenze ukuba kungaziwa. Umbhali wepulpiti ukusukela ngo-1626 akaziwa, mhlawumbi ikwangulaa mntu wenza ipulpiti kwicawe yaseJäreda.
Iintsimbi ezimbini zixhonywe kwinqaba yecawa. Zili-12 iingqekembe ezishicilelweyo kwibhanti enkulu yokubhala entanyeni kunye nezinye izinto ezi-2 ezibhalwe emzimbeni womlindo. Ngoncedo lwezi mpapasho, umntu unokugqiba ukuba iwotshi kufuneka
sele iphoswe kutshanje ngee-1520s.
Icawe ineseti enkulu yamalaphu eyenziwe ngekhulu lama-1900.
Phakathi kwezinye izinto, umlobothi worhwebo ukusuka ngo-1977 kunye nombhoxo wekwayala owenziwe ngumculi wempahla
U-Inga-Mi Vannérus-Rydgran, uHultsfred.
Isithsaba esidala sebandla senziwa ngumkhandi wegolide uCarl Adam Svanberg waseVimmerby. Yanikezelwa kumboniso wezomzi-mveliso eStockholm ngo-1866.
NgoMvulo: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosukuNgoLwesibini: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosukuNgoLwesithathu: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosukuNgoLwesine: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosukuNgoLwesihlanu: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosukuNgoMgqibelo: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosukuNgeCawa: Vula iiyure ezingama-XNUMX ngosuku
UStorgatan, 570 81 uJärnforsen
6 uphononongo kuGoogle
Kuhle ukuba uye .. ubanzi kwaye ucocekile
4/5 2 kwiminyaka eyadlulayo
5/5 2 kwiminyaka eyadlulayo